Masangano Anomirira Vadzidzisi Okurudzira Hurumende Kuti Igadzirise Zvinhu Muzvikoro Zvemumaruva
Kubvumbi 30, 2012
Sangano re Progressive Teachers Union Of Zimbabwe, PTUZ, rinoti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu muzvikoro zvekumaruva kuitira kuti vadzidzisi vane hunyanzvi wanikwe vabatsire mukusimudzira dzidzo munyika.
Mukuru anoona nezvezvirongwa zve PTUZ, va Oswald Madziva, vanoti zvikoro zvizhingi zvemumaruva munzvimbo dziri muMashonaland East, Mashonaland Central ne Matebeleland South neMatabeleland North dziri kutarisana nedambudziko revadzidzisi vane hunyanzvi sezvo zvikoro zviri munzvimbo idzi zvisina kumira zvakanaka. Va Madziva vanoti kushungurudzwa kwevadzidzisi vakadzidzira basa iri mune dzimwe nzvimbo munguva dzesarudzo kuri kuita kuti vatize munzvimbo idzi vachisiya zvikoro zviine vadzidzisi vasina kudzidzira basa rekudzidzisa, kunyange hazvo ma temprary teachers ari kubatsira zvikuru munzvimbo dzakasiyana siyana. Kushaikwa kwezvinhu zvinodiwa muzvikoro, pamwe nekushaikwa kwevarairidzi vane hunyanzvi kunonzi kuri kukonzera kudzikira kwedzidzo munyika.
Sangano the Zimbabwe Teachers Association (ZIMTA) rinotiwo pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa muzvikoro zvemumaruwa kuitira kuti vadzidzi vemuzvikoro umu vawanike vachibuda zvakanaka mubvunzo dzepamusoro. Mukuru we ZIMTA, va Sifiso Ndlovu, vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera zvinoshandiswa muzvikoro izvi semabhuku ne zvimwewo kuitira kuti vadzidzi ava vakwanise kubudirira mubvunzo dzepamusoro.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvedzidzo pamusoro penyaya iyi.